Turjumidda Spectrumschool ku dhig luqad kale
STEM> injineernimada & teknoolajiyada
NEW - shaqaale soo saaraha Metal - CNC
Waxaad ku baraneysaa qalabka birta oo aad diyaarinaysid farsamo ahaan xirfadleyda ku shaqeeya birta. Waxaa xoogga la saaraa farsamaynta biraha CNC.
Maaddaama timo jimicsi ah waxaad noqotaa khabiir ku takhasusay jarista, cadayashada, midabaynta iyo ruqseynta, adigana raacda isbeddelada ugu dambeeyay. Marka lagu daro daryeelka timaha, waxaad sidoo kale baraneysaa farsamooyinka aasaasiga ah ee gacanta iyo wajiga. Waxaad baraneysaa inaad si madax-bannaan u shaqeyso oo aad qalinjabiso ka dib waxaad bilaabi kartaa inaad ku shaqeyneysid qashin khibrad leh.